Sidee sheeko loogu muujiyaa? Sawirka carruurta tallaabo-tallaabo ayaa loogu sheegay ... | Abuurista khadka tooska ah
Marián wuxuu nooga tagay macluumaad aad u xiiso badan faallo: boggiisa. Dhexdeeda, wuxuu talaabo talaabo ugu sheegayaa wax walboo uu sameynayo si uu u abuuro sawirada carruurta ee sheeko hadda ku jirta sameynta.
Waan ogahay inay waxyar ka fogtahay dhamaan dunida dhijitaalka ah ee aan kudhaqaaqno, laakiin male-awaalka looqaaday dunida dhabta ah ee aan shaashadda udhaxaynin ayaa mararka qaar aad uga cajaa'ib badan ugana abaal marin badan midka aan ku abuureyno kaniiniga iyo kiiboodhka, marka waxba ma qaban karo oo aan ka ahayn kugula talin inaad raacdo horumarka Marián.
Shaqo badan, dadaal badan iyo rabitaan badan inaad noo sheegto wax kasta oo aan u baahanahay inaan ka ogaanno tusaalahan. Dadka sida Marián waxay aad uga fududeeyaan barashada iyo fahamka.
Xiriir | Bisadda Buluugga ah ee Prussian
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sidee sheeko loogu muujiyaa? Sawirka carruurta tallaabo tallaabo ayaa loogu sheegay ...
Adaa mudan! Dadka sameeyaa waa kuwa ay tahay in la taageero, oo haddii aan wax ka baran karno dhammaanteed, markaa xitaa kuuma sheegi doono.
Cajiib !!! Tani runti ma fileynin !! Waxaan booqanayay boggaaga waxaadna iga buuxisay farxad layaabkan !!! Aad baad ugu mahadsantahay adoo bloggeyga u soo geliyay taada iyo sharaxaadda… aad u macaan badan !!
Ku jawaab Marián
Mar labaad mahadsanid :)
Vladimir Ayala Huamán dijo
fadlan. Waxaan u baahanahay fikrad sheeko sawir leh, qoraaga iyo magaca buugga. Mahadsanid
Jawaab Vladimir Ayala Huaman
fadlan. Waxaan u baahanahay fikrad sheeko sawir leh, magaca qoraaga iyo buugiisa. Waxaan u baahanahay cilmi baaristeyda Mahadsanid!
kaarka perilla dijo
waad ku mahadsantahay sida aad iiga caawisay sida loo sawiro sheeko
Ku jawaab karol perilla